अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री स्वदेश फिर्ता, नेपाललाई के दिए सन्देश ? - Vishwanews.com
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री स्वदेश फिर्ता, नेपाललाई के दिए सन्देश ?
काठमाडौं । नेपालको तीन दिने भ्रमण पुरा गरि दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । नेपालमा रहँदा उनेल राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र नेपालको विकासका साझेदारसँग सम्बन्ध स्थापना तथा नवीकरणको प्रयास गरेको बताइएको छ ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँगै अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त फाइजर खोप वितरणको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा अवलोकनमा समेत उनी पुगेका थिए ।
उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी र नायब शिष्टाचार महापाल रेवतिरमण पौडेलले बिदाइ गरेका छन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । उनले मिति तोकेरै आयोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् ।